Avy hatrany ilay mpanompon’i Abrahama dia naka rameva folo ary nanao ilay dia lavitra. Rehefa tonga teo akaikin’ny toerana nonenan’ny havan’i Abrahama izy, dia nijanona teo amin’ny fantsakana. Efa harivariva ny andro tamin’izay, fotoana fandehanan’ireo vehivavy ao an-tanàna naka rano tao amin’ny fantsakana. Dia nivavaka tamin’i Jehovah ilay mpanompon’i Abrahama hoe: ‘Enga anie ka ny vehivavy izay maka rano ho ahy sy ho an’ny rameva no ho ilay voafidinao mba ho vadin’i Isaka.’
Rehefa vitan-dRebeka izany, dia nanontanian’ilay mpanompon’i Abrahama azy ny anaran-drainy. Nanontany koa izy raha ho afaka handany ny alina ao an-tranon’izy ireo. Hoy ravehivavy: ‘I Betoela no raiko, ary misy toerana ho anao ato aminay.’ Fantatr’ilay mpanompon’i Abrahama fa zanak’i Nahora rahalahin’i Abrahama i Betoela. Noho izany dia niankohoka tamin’ny tany izy ary nisaotra an’i Jehovah noho ny fitarihany azy ho eo amin’ny havan’i Abrahama.
Hizara Hizara Nahazo Vady Tsara i Isaka
my tant. 16